Thank you so much Mrs. Aster Workn for Sharing your experience - SKT International College
October 4, 2021 SKT International College
ကျမကတော့ Mrs Aster workn ဖြစ်ပါတယ်.ကျမရဲ့ ကလေး ၄ယောက် ကတော့ SKT International College မှာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်. SKT မှာစစကျောင်းအပ်တုန်းကTsega ကတော့ IB ပထမနှစ်အတန်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီးFikir ကတော Grade9/Year 10 ,Selam ကတော့ Grade 8 Tihut ကတော့ Grade6စတင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ယခုမှာတော့ အကြီးသုံးယောက်မှာ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးပြီး အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Tsega ကAustralia .မှာ
ရှိတဲ့ South Walesတက္ကသိုလ်မှာနောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်နေပါသည်။ ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ တစ်နှစ်နားပြီး သင်တန်းတွေတက်ရောက်နေပါသည်။ တတိယကတော့ ဒီနှစ်မှာဘဲ IB Program ကို ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်.
SKT ကို အဓိက ရွေးချယ်ရတဲ့ အကြောင်းက SKTရဲ့ program ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. ကျမတို့က IB Program နဲ့ Cambridge သင်ရိုး ကို ကလေးတွေအတွက် သင်ယူစေချင်ပါတယ်. ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားကျောင်းများကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပေမယ့် SKT ကျောင်းကိုပဲရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒုတိယ အနေနဲ့ကတော့ SKT ရဲ့ facilities တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်. SKT ကိုရွေးဖြစ်တာက IB program လည်းသင်ကြားပေးနိုင်ပြီး ကျောင်းအကျယ်အဝန်းနဲ့ ဆိုယင် ကျောင်းသားဦးရေ မျှတာလာလဲ ပါတာကြောင့်ပါပါတယ်.
SKT ကျောင်းရဲ့ သင်ကြားမူကို အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်. ကလေးတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ကြားမှုပုံစံ အခြေခံကောင်းတွေ ရရှိခဲ့တယ်. ဒါကြောင့် ဒီသင်ကြားမှုရဲ့ ရလဒ်က ဒီ၅နှစ်ကာလအတွင်းမှာ ကလေးတွေဟာ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှု နဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်တွေ စသဖြင့် ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာပါတယ်.
ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများကြားရှိ သင်ကြားမှုအပိုင်းနဲ့ သင်ယူမှူ အပိုင်းဆိုယင်ဖြင့် ကျမအနေနဲ့ ၁မှ ၁၀ အမှတ်ပေးရမယ်ဆိုယင် ၁၀+ ပေးမိမှာ အသေချာပါဘဲ. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုယင် ကျမ တွေ့ဖူးသမျှ ဆရာများထဲမှာ SKT မှ ဆရာများမှာ အလွန်ဖော်ရွေပြီး မိသားစုကဲ့သို့ နွေးထွေးမှုပေးနိုင်ပြီး ကလေးများအပေါ် တကယ် ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးနိုင်ကြပါတယ်. ဆရာနှင့်ကျောင်းသားများမှာ နွေးထွေးပျော်ရွင်စွာ ပညာသင်ကြားမှုရှိတယ်ဆိုတာ မိဘအနေနဲ့ ကျမ ခံစား လို့ရပါတယ်. ထိုကဲ့သို့နွေးထွေးဆက်ဆံမှုမျိုးက ကျောင်းသားများအတွက် စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲ အောင်မြင်မှုများကို ပိုမိုပေးနိုင်သည်
ကျမအရှေ့မှာ ပြောခဲ့သလိုဘဲ ကလေးတွေဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီး. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးနိုင်ကြပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာ သင်ယူနိုင်မှု အစရှိတဲ့ အရည်အချင်းများ ရှိလာကြတယ်. အထူးသဖြင့် Research,Essay Writing တို့ကို အလယ်တန်းလောက်ကပင် ကောင်းစွာရေးသားနိုင်ခြင်း. စာဖတ်ခြင်း. မိမိဖတ်ထားသော စာပေများအား အနှစ်ချုပ် ပြန်လည်ရေးသားနိုင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို စနစ်တကျ သင်ကြားပေးခြင်းကြောင့် ကလေးများရဲ့ ရှေ့ဆက်သွားရမည့် ပညာရေး လမ်းကြောင်းမှာ တကယ်လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း များ ပြည့်စုံနေတာကို တွေ့ရပါတယ်. IGCSE စာမေးပွဲပုံစံကလည်း အဖြေမှန်ကိုဖြေရန် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုမျိုးမဟုတ် သော်လည်းပို၍ ပို၍စူးစမ်းလေ့လာရန် နည်းလမ်းမျိုးဖြင့် ဖြေရသည့်စာမေးပွဲပုံစံဖြစ်ပါသည်။ထိုအားသာချက်ကြောင့် IB Program ကိုတက်ရောက်ရန် အဆင်ပြေခဲ့သည်။ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့Tsega ကတော့တန်းပြီး IB အတန်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် တချို့အခက်အခဲမျိုးလေးတွေ ရှိခဲ့သည်။Fikir နှင့် Selamကတော့ IGCSE တက်ရောက်ပြီး IB တက်ရောက်သောကြောင့် တစ်ချို့အားသာမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ IB Program ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Program တစ်ခုပါ။
Tsega ကတော့ IB ကို (၂) နှစ်ပဲသင်ယူလေ့လာခဲ့ပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရသည်။ ကျမတစ်ခါတလေတောင် သူ့ကိုပြောတယ် တက္ကသိုလ်တက်ရင်တောင် ဒီလိုမျိုး Skills တွေကိုလေ့လာဖြစ်မှာတောင် မဟုတ်လောက်ဘူး ဆိုပြီး
ကျမကလေးတွေ အတွက် ကျမအရမ်းဂုဏ်ယူတယ် ဒီလိုမျိုးနွေးထွေးတဲ့ ဆရာများရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် အရမ်းကိုစိတ်ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒီကျောင်းကိုလည်း အမြဲသတိရနေမှာပါ။